Ibhokisi yokwakha kunye neNdibano yoomatshini- iPandawill Technology Co, Ltd
Ukongeza kwindibano yebhodi yesekethe eprintiweyo (i-PCBA), sibonelela ngebhokisi yokwakha indibano yokudityaniswa kweesistim kunye neemodyuli kunye nokudityaniswa kwemveliso epheleleyo. Ngothungelwano lwethu lwabathengisi abakhethiweyo, thina, kwinkampani ye-Asteelflash EMS, siyakuxhasa ukusuka ku-A kuye ku-Z, ukusuka kwikoteyishini ukuya kwinqanaba lokuvelisa ubunzima beprojekthi yakho.
Zonke iinkonzo eziphantsi kophahla olunye, amaqela kwinkonzo yemveliso yakho, zizinto eziphambili zokungena kwiimarike ngokukhululekileyo.
Ukuya ngaphaya kwe-PCBA, sinikela ngebhokisi yokwakha indibaniselwano kunye nendibano ngokumisela imigca yendibano yabathengi.
Ukugxila kuphuculo oluqhubekekayo, siyazibophelela ekusetyenzisweni nasekuhleleni inkqubo yendibano, ukuyenza ukuba isebenze ngakumbi kubathengi bethu kwaye ngenxa yoko bakhuphisane ngakumbi kwiimarike zabo. Ngeenkonzo zethu zokuvelisa ezikwizinga eliphezulu, iindawo zemveliso ezinikezelweyo kunye namaqela, aqeqeshelwe ukugqwesa ekwenzeni ibhokisi yokwakha indibano kwelona nqanaba liphezulu lomgangatho, siyazibophelela ekukuxhaseni ekukhuleni nasekuqiniseni isikhundla sakho kwintengiso yakho, njengolwandiso lweqela lakho .
Njengenkampani yokuvelisa ikhontrakthi ngombane, sijolise ekuziseni abathengi bethu ukuba bagqwese.
Siyakholelwa kwiqela kunye nendlela yokusebenzisana, ukuxhasa imveliso yakho kwinqanaba loyilo kodwa nasekupheleni kobomi bemveliso yakho, usebenza ngokuzisa isizukulwana esitsha ebomini. I-Asteelflash, iqabane lakho leeNkonzo zeMveliso ze-Elektroniki (EMS) zobunjineli kunye neenkonzo zemveliso, ukusuka ku-A kuye ku-Z.
Izisombululo zethu zokwenza izinto ngombane kwiBhokisi yokwakha:
• Iintambo zokubopha
• Indibano ye-electro-mechanical edibeneyo
• Ukudibana ngokufanayo
• Uvavanyo olusebenzayo